विदेशबाट मिस्डकल आयो ? कल ब्याक नगर्नुस्, यस्तो छ कारण « Postpati – News For All
विदेशबाट मिस्डकल आयो ? कल ब्याक नगर्नुस्, यस्तो छ कारण
कात्तिक १२, काठमाडौं । तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस्ट कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ ।
नचिनेका त्यस्ता नम्बरमा ‘कल ब्याक’ नगर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ । प्राधिकरणले पोल्याण्ड, मलेसिया, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण सुडान, साउदी अरेयिबा लगायत देशबाट आएका त्यस्ता कललाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
२०७५ कार्तिक १२,सोमबार को दिन प्रकाशित